Warbixin: Borussia Dortmund ooisku diyaarineysa bixitaanka Erling Braut Haaland
Home Horyaalka Germalka Warbixin: Borussia Dortmund ooisku diyaarineysa bixitaanka Erling Braut Haaland
Kooxda Borussia Dortmund ayaa lagu soo waramayaa in ay diyaarsatay liistada bartilmaameedyada ay ku badali karto Erling Braut Haaland kadib markii ay aqbashay in uu weeraryahanku ka tagi karo kooxda xagaaga.
Haaland ayaa wali ah mid kamid ah ciyaartooyda loogu doon doonista badanyahay kubada cagta aduunka kadib markii ay dhalisay 43 gool 44 kulan oo ay kasoo muuqatay tan iyo markii ay kubiirtay BVB bilowgii sanadkii hore.
Afar ka mid ah kooxaha Premier League ee Manchester City , Manchester United , Chelsea iyo Liverpool ayaa dhammaantood la sheegayaa inay xiiseynayaan ciyaaryahanka reer Norway, halka Real Madrid sidoo kale lala xiriirinayo.
Agaasimaha Dortmund Hans-Joachim Watzke ayaa dhawaan soo jeediyay in saameynta dhaqaale ee cudurka faafa ee coronavirus ay ku qasbi karto kooxda Jarmalka inay lacag kaash ah ku bixiso Haaland.
Sida laga soo xigtay Eurosport , qorshooyinka ayaa durbaba la diyaariyey si ay u keenaan bedel toos ah 20 jirkaan haddii uu dhabtii uu dhaqaaqo.
Sevilla xidigeeda Youssef En-Nesyri , oo 13 gool ka dhaliyay La Liga xilli ciyaareedkan, ayaa lagu xamanayaa inuu ka mid yahay kuwa Dortmund isha ku heyso.
Previous articleBayer munich oo Rabto in Koulibaly iyo Upamecano iska garab ciyaar siiso.
Next articleAndreas Pereira oo ku laabanaya Manchester United maadaama Lazio aysan awoodin iibsigiisa joogtada